Slideshare မှ B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန် | Martech Zone
Slideshare ကိုအပြည့်အဝ B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 5, 2015 Douglas Karr
သင်က B2B စျေးကွက်အတွက် Slideshare အသုံးပြုခြင်း၏နောက်ကွယ်ရှိအားသာချက်များနှင့်နည်းဗျူဟာများအကြောင်းကို ပိုမို၍ စေ့စပ်သေချာစွာဆွေးနွေးလိမ့်မည်ဟုမသေချာပါ SlideShare မှ A-to-Z လမ်းညွှန် Feldman ကို Creative မှ။ ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံနှင့်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်အလွန်ကောင်းသည်။
SlideShare သည်စီးပွားရေးအသုံးပြုသူများကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ SlideShare အသွားအလာကိုအဓိကအားဖြင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုရေးတို့ကမောင်းနှင်သည်။ ၇၀% ကျော်သည်တိုက်ရိုက်ရှာဖွေမှုမှရရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များထံမှ traffic သည် Facebook ထက် ၄ ဆပိုများသည်။ အသွားအလာအမှန်တကယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ၅၀% ကျော်သည်အမေရိကန်ပြင်ပမှဖြစ်သည်
တင်ဆက်မှုပလက်ဖောင်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်အံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သို့သော်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာသစ်အရ စျေးကွက်၏ ၈၅% သည် SlideShare ကိုမသုံးကြပါ. Slideshare ကိုသုံးပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုလည်းအားပေးပါ။ ၎င်းသည်အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပေးတဲ့အကြံပြုချက်တွေအပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုရေးဆွဲသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည် Slideshare တွင်အသုံးပြုရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ LinkedIn အကောင့်တွင်မြှင့်တင်ရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်တင်ဆက်မှုပုံစံကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ Slideshare တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏သတင်းအချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်နှင့် whitepapers များကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းသည်သင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည့်အကြောင်းအရာများကိုကျယ်ပြန့်စေပြီး၎င်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ပေါ်လာစေနိုင်သည်။
Tags: b2b စျေးကွက်ရှာဖွေရေးb2b စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်ဖန်တီးမှု feldmanSlideshare မှလမ်းညွှန်slideshareslideshare လမ်းညွှန်ဆလိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆလိုက်ရှယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်Slideshare မှ a-to-z လမ်းညွှန်
Social Media Marketing သင်ရှောင်ရှားသင့်သောအမှားများ
5:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 51
မင်းကိုငါကျေနပ်မိပါတယ်၊ မင်းရဲ့ post နဲ့ infographic ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာထောက်ခံပြီး MTBers နဲ့မျှဝေခဲ့တယ်။ လူတိုင်းက SlideShare နှင့် ပတ်သတ်၍ အချက်အလက်များနှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာစမ်းသပ်ချက်အနည်းငယ်ကောက်ယူမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
5:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 02
ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ, Barry! ဒါဟာရှည်လျားလွန်း wayyyyy ခဲ့ ငါသည်သင်တို့ကိုမကြာမီ Podcast တခုကိုအပေါ်ရရန်လိုအပ်သည်!